မဟာစည်သြ၀ါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဇဋိလ (သာသနဓဇ သိရီပ၀ရ ဓမ္မစရိယ၊ ၀ိနယပါဠိပါရဂူ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ) (Phd.) ၏ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ သာသနာပြုခရီး။ ...(၂) | Mahasi Sasana Yeik Tha
မဟာစည်သြ၀ါဒါစရိယ ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဇဋိလ (သာသနဓဇ သိရီပ၀ရ ဓမ္မစရိယ၊ ၀ိနယပါဠိပါရဂူ၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ) (Phd.) ၏ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ သာသနာပြုခရီး။ ...(၂)
Submitted by im_admin on Mon, 01/04/2016 - 13:50
နယူးယောက် JFK လေဆိပ်တွင်လာရောက်ကြိုဆိုသူများနှင့်အတူ
မေလ (၁၈)ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ (၃)နာရီ တွင် New York မြို့ JFK International Airport သို့ရော်ရှိကြရာ ဆရာတော် ဦးဂုဏသီရိနှင့် တပည့်ဒါယကာ ဒါယိကာမများ လာရောက်ကြိုဆို ကြပါသည်။
ထိုနောက် JFK International Airport မှကားများဖြင့် ဆရာတော်ကြီးအား ပင့်ဆောင်လာခဲ့ပြီး New York Long Island New Hyde Park မြို့ Ashland Avenue ရှိ မဟာစည် သတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿသာနာရိပ်သာသို့ ရောက်ရှိကြပါသည်။ ထိုနောက် ဆရာတော်ကြီးနှင့် ဆရာတော် ဦးဂုဏသီရိတို့သည် ကျောင်းသစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားပြုလုပ်ရန် အစီအစဉ်များနှင့် တရာစခန်းဖွင့်ရန် ကိစ္စများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပါသည်။
ကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲသို့ ၂၀၁၅-ခုနှစ်၊ မေလ (၂၃)ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ တရားစခန်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၃)ရက်နေ့မှ ဇွန်လ (၁)ရက်နေ့အထိလည်းကောင်း ပြုလုပ်ရန်သတ်မှတ်တော်မူကြပါ သည်။